by-election in Burma | MoeMaKa Burmese News & Media
မတ် ၃၁၊ ၂၀၁၂“နောက်ဆုံးထုတ် ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ် (အတွဲ ၂. အမှတ် ၈၈) အဖုံးမှာ ခွင့်ပြုချက်မရခဲ့တဲ့ ကာတွန်း” ဟု အော်ပီကျယ်၏ Facebook တွင် ဖော်ပြထားသည်။
One Response to by-election in Burma
Mon on March 31, 2012 at 9:23 pm
Great!! No need to get their permission as we still got Facebook!